Iindawo zeshishini Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ngaphakathi Melbourne
IOstreliya, ngokusemthethweni i-Commonwealth yase-Australia, lilizwe elizimeleyo elibandakanya ilizwekazi lase-Australia, isiqithi iTasmania, kunye neziqithi ezininzi ezincinci. Lelona lizwe likhulu eOceania nelizwe lesithandathu ngobukhulu kwilizwe liphela. Abemi abazizigidi ezingama-26 bahlala ezidolophini kakhulu kwaye bagxile kakhulu kulwandle lwasempuma. Idolophu enkulu yaseOstreliya yiCanberra, kwaye yona idolophu enkulu yiSydney. Ezinye iindawo eziphambili zedolophu enkulu iMelbourne, iBrisbane, iPerth, neAdelaide. Abantu bomthonyama baseOstreliya bahlala kwilizwekazi kangangesithuba seminyaka engama-65,000 ngaphambi kokufika kwabahloli bamazwe baseDatshi ekuqaleni kwenkulungwane ye-17, abathi igama layiNew Holland. Ngo-1770, isiqingatha sasempuma se-Australia sabangwa yi-Great Britain saza saqala ngozinzo zesohlwayo sasiwa kwikholoni yaseNew South Wales ukusukela ngomhla wama-26 kuJanuwari ngo-1788, umhla owaba lusuku lwesizwe e-Australia. Inani labemi likhule ngokuzinzileyo kumashumi eminyaka alandelayo, kwaye ngexesha lokungxama kwegolide eli-1850, uninzi lwelizwekazi lwalusele luhlolisisiwe kunye neminye imikhosi emihlanu elawula i-colonies eyasekwayo. Ngomhla woku-1 kuJanuwari ngo-1901, iicolon ezintandathu zadityaniswa, zenza i-Commonwealth yase-Australia. I-Australia ke yagcina inkqubo ezimeleyo yenkululeko yedemokhrasi esebenza njengekumkani yomgaqo-siseko yenkundla, equka amazwe amathandathu kunye nemimandla elishumi. IOstreliya lelona lizwe lidala, elithe tyaba, kwaye lelomileyo ilizwekazi, kunye nomhlaba ochumileyo. Inomhlaba ongama-7,617,930 eekhilomitha (2,541,300 sq mi). Ilizwe elingumda oguqukayo, ubukhulu bawo bayinika imihlaba eyahlukeneyo, enezinkqantosi embindini, amahlathi emvula ashushu emantla-mpuma, kunye neentaba ezantsi-mpuma. Ubuninzi babemi, i-2.8 abahlali ngekhilomitha nganye, bahlala phakathi kwezona zinto ziphantsi emhlabeni. I-Australia ivelisa ingeniso yayo kwimithombo eyahlukeneyo kubandakanya ukuthengiswa kwemigodi ngaphandle, unxibelelwano ngomnxeba, ukubhengezwa kwebhanki, imveliso, kunye nemfundo yamazwe aphesheya.Australia lilizwe eliphuhlileyo, noqoqosho lwehlabathi lwe-14. Inoqoqosho olunengeniso ephezulu, enelishumi elisezantsi kwilizwe liphela. Amandla engingqi kwaye anenkcitho yezomkhosi ephezulu ye-13. IAustralia inelizwe lesibhozo ngobukhulu abafuduki, kunye nabafuduki be-accounting abangama-29%. Ukuba nesalathiso senkqubela phambili yesithathu ephezulu yenkululeko kunye neyesibhozo yenqanaba eliphezulu kwilizwe liphela, ilizwe likumgangatho wobomi, impilo, imfundo, inkululeko yezoqoqosho, inkululeko yoluntu, kunye namalungelo ezopolitiko, kunye nazo zonke izixeko eziphambili ezilingana ngokuthelekiswa kwehlabathi. uphononongo lokuphilisa. IAustralia lilungu leZizwe eziManyeneyo, i-G20, i-Commonwealth of Nations, i-ANZUS, Umbutho Wokusebenzisana Kwezoqoqosho Nophuhliso (i-OECD), Umbutho wezoRhwebo lweHlabathi, i-Asia-Pacific Cooperation, iPasifiki yeQonga leziqithi, kunye neendlela ze-ASEAN Plus ezintandathu.